Ny tsiahin’ny karnavaly lavitry ny firenena – votoaty tao amin’ny bilaogy Boliviana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2019 3:51 GMT
Jereo ny sary nalain'i Marcelo Montecino avy amin'ny Carnaval 1994 tao Oruro ity ao amin'ny pejiny Flickr.
Efa-taona lasa izay no fotoana farany nandraisain'i Alexey anjara tamin'ny Karnavaly tao an-tanànany ao Oruro. Mipetraka any ivelany any Holandy izy izao, ary maneho hevitra ao amin'ny blaoginy Alexey Writes, fa noho ny antony sasany, nihevitra izy fa manina kokoa ny fety noho izay ao aminy ary angamba satria fantany fa tsy mora ny miverina any Bolivia. Nanambara izy na dia izany aza fa ny Karnavaly ao Oruro no “hany mendrika handraisana anjara, na dia mahatsapa toy izany aza ny olona avy ao Oruro.” Vao haingana izy no niverina tamin'ny dia fohy tany Slovenia, nandritra ny fotoanan'ny karnavaly.
Jim Shultz, monina ao Cochabamba, manoritsoritra ireo mpifanolo-bodirindrina izay mankalaza amin'ny fisotroana toaka chicha, izay vita avy amin'ny katsaka nalòna, ary nahafantatra ny fomba amam-panao miaraka aminy. Fantany na izany aza ny fomba filalaovana ny lalao mba handosirana ny lahatra sasantsasany.
Farany, Nick Buxton manoratra ny ventsoventsony amin'ny Karinavaly ao amin'ny bilaoginy Open Veins.